Fefy miovaova ho an'ny mpanamboatra mpamatsy sy mpamatsy trano - Fitaovana iraisam-pirenena ao Shina - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Fitiavana ho an'ny trano fambolena > Fehezina azo amidy ho an'ny fanaka
Ny kitapom-pandaminana misy alim-bovoka sy ny tongotra miova ho an'ny tongony sy ny seza dia afaka manome valiny tsotra ho an'ny tany tsy dia misy dikany. Ireo fanampiana ireo dia manome fiofanana tsara sy maharitra ary azo jerena ao anaty fitaovam-pampianarana samihafa.
Product Introduction of the Feet Adjustable for Furniture
Fombafomba goavana azo an-tanana avy amin'ny mpamatsy entana WENAP. Ny halaliny dia ahitana tongotra marefo sy lavaka ho an'ny seza sy latabatra, tongotra miovaova ho an'ny mpanotrona sy ny milina ary ny tongotra vy tsy misy ala ho an'ny fampiasana hygienic sy catering. Maro ireo safidy manokan-tena anisan'izany ny fantsom-bolt, ny paty fanindronana, ny tongotra vy tsy misy rongony, ny fantsom-bokatra ary ny bakteria manohitra ny bakteria.
Product Parameter amin'ny Fefy ho an'ny trano fambolena
SUS 304/202, Carbon Steel, POM / PP / PE, manamafy ny Nylon, HDPE na araka ny fepetra takian'ny mpanjifa
Manana 7 ireo milina fanontam-batana feno automatique, fitaovana fanaovan-trano, fitaovana fanaraha-maso kalitao, milina fiara ary ny sisa.
Safidy tsara izany ho an'ny tongotra lehibe sy kely ho an'ny fitaovana rehetra sy ny famolavolana, ny fitaovana maoderina, ny fitaovana fametavetana, ny fametahana fitaovana ho an'ny indostria.
Manaiky baiko madinika
Ny fanondranana fanondranana entana, ireo vokatra lehibe amin'ny fampiasana rakotra fanondranana plywood, ireo vokatra kely dia ampiasaina amin'ny famokarana carton matevina, hiantohana ny fanamafisana ny fahamarinan-toerana sy ny fiarovana.
Valiny 24 ora mankany amin'ny fanadihadian'ny mpanjifa sy ny serivisy fivarotana
Fandefasana entana avy amin'ny Air, Sea na International Express.
1. Vidin'ny fifaninanana; 2. OEM fanompoana azo ampiasaina
Amin'ny ankapobeny dia 30% T / T mialoha, 70% amin'ny kopian'ny B / L
Miankina amin'ny fangatahan'ny mpanjifa ny fanaovana ny bobongolo.
Ny endri-tsarimihetsika sy ny fampiharana ny fefy miovaova ho an'ny fanaka
Nopotehina izy ireo ary azo afatotra na nampidirina tao anaty milina na alimina sy alim-bary. Takelaky ny ravina ho an'ny anti-slip.Manamin'izany, manana baolina lavalava izy, ka mamela ny tongony hanitsy ny lanjany. Tena ilaina tokoa ny fametrahana ny fametrahana azy trano, na fampiasana tongotra eo amin'ny fametrahana izay mila mihetsika tsy tapaka. Ny fantsom-bokim-baravarankely dia mihozongozona sy vibration, manome fiarovana amin'ny milina, conveyor ary latabatra.
fampiharana:Safidy tsara izany ho an'ny tongotra lehibe sy kely ho an'ny fitaovana rehetra sy ny famolavolana, ny fitaovana maoderina, ny fitaovana fametavetana, ny fametahana fitaovana ho an'ny indostria.
Toro-hevitra momba ny fantsom-pandaminana ho an'ny trano fambolena
Packaging Details:Ny fanondranana fanondranana entana, ireo vokatra lehibe amin'ny fampiasana rakotra fanondranana plywood, ireo vokatra kely dia ampiasaina amin'ny famokarana carton matevina, hiantohana ny fanamafisana ny fahamarinan-toerana sy ny fiarovana.
Hot Tags: Fehezina azo amidy ho an'ny trano fambolena, China, mpamokatra, mpamatsy, orinasa, vita avy any Shina, mividy, mividy, maimaim-poana, an-tapitrisany, haingana, vidin'ny vidin-tsolika,
Ny tongotra miovaovaFehezina miovaova ho an'ny workbench